Ahịrị machining etiti nwere ike ịgbanwe ngwa ọrụ n’ime igwe na - eme ihe n’onwe ya, nwere ike otu oge na - egwepu egwepịa anọ, olulu mmiri, na - akụ nkọ, na - akụta ya, na - akụ ya na usoro ndị ọzọ. Ihe owuwu nke akụrụngwa akụrụngwa siri ike, ọnya buru ibu, ihe dị elu, dabara na ụdị ụdị dị mma, mpaghara nhazi igwe nrụpụta dị elu, na-ekwe nkwa nhazi nhazi nke arụmọrụ dị elu na njiri elu nke ngwaahịa ma ọ bụ obere.
Horizontal machining center nwere ike ịgbanwe ngwa ọrụ n’ime igwe na - arụ ọrụ, nwere ike otu oge ịzọlata egwe ọka anọ, mkpọpu mmiri, na - akụ, belata, na - akụ, na usoro ndị ọzọ. ụdị nile dị egwu,
Site na ụzọ eji arụ ọrụ ọgbara ọhụrụ a na - ejikọta ihe eji arụ ọrụ na njiri mara nke igwe eji arụ ọrụ, yana ịjikọ teknụzụ njikwa elektrik na ergonomics dum nke igwe, igwe zuru oke, njikwa eletrik dị elu, ntụkwasị obi dị elu na nke kachasị mma. nkwụsi ike ọkụ, wdg,
A na-eji ya arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu, akpaaka, ọrụ ịkpụzi usoro, usoro GMF nwere ike inye sistemụ arụmọrụ dị elu yana ngwa ngwanrọ nke enwere ike ịrụ ọrụ ngwa ngwa. Nke a na-enye ọtụtụ nhọrọ nke ọtụtụ nhọrọ ga-enyere gị aka ịghọta nrọ ziri ezi dị elu.
Ntuziaka ụdị mpịgharị rolle nwere akwa siri ike na usoro dị elu, nke dabara adaba maka ịkpụ oke.
Z axis na-anabata ụzọ anọ ma ọ bụ ihe eji achọ ụra, nke dịịrị ndị ahịa mfe ịhọrọ ngwaọrụ igwe. Uzo uzo abuo adabara maka nhazi oke-elu, ma onye n’enwe anumanu di nfe ka ekwesiri iji dozi elu.
Njikọ njikọ nke 5-axis na njikwa loop zuru ezu na-ejide n'aka na ọ dị mma maka ịhazi ihe ndị dị mgbagwoju anya nke ihe eji akpụ akpụ.
The Z axis anọ waya okporo ụzọ nwere obere mgbagide esemokwu na ezi ziri ezi.
Na German KESSLER AC na-atụgharị isi na ịgbanye ụdị ndụdụ, a na-ebugharị anyụike AC site na moto torque.
Ekebeere igbe nke igbe nke ụdị igbe ihe ana - ekwu na echegbachaghị mgbakasị echiche, yana mbelata ihe ọkụ.
Ighaji oghere dị jụụ na-egbochi ndọtị ọkụ.
E wezụga njiri mara nhazi dị iche iche nke etiti kwụ ọtọ nhazi, VM usoro vetikal ịhazi nhazi emeela atụmatụ kachasị mma na nhazi yana ebum n’uche nke ụlọ ọrụ na-akpụzi ebu, nke nwere ike imeju ihe achọrọ dị elu, ịdị ọcha dị elu na obere okpomọkụ. ndọtị mgbe a na-akpụgharị ebu.
E wezụga njiri mara nhazi dị iche iche nke etiti vetikal machin, V usoro elu igwe kwụ ọtọ na-eji igwe kwụ ọtọ emeela atụmatụ kachasị mma na ebumnuche dị elu na ihe nrịanya dị elu na ụlọ ọrụ nhazi ngwaahịa na nhazi ya na nhazi ya.
N'iji usoro ntụgharị ihu ogologo na ogologo oche dị ogologo, a na-ekewapụ ahịrị kwụ ọtọ na mpaghara nhazi, a na-enwetakwa arụmọrụ kachasị mma na oghere arụmọrụ kachasị mma.
General Vetikal Machining center, nke ejikarị na akụkụ na-akpụ akpụ na ndị na-akpụzi, ihe a na-arụ na friji nwere ike ịbụ maka imecha egwe ọka, mkpọpu akụ, na-agwụ ike, na-agagharị na usoro ndị ọzọ. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ otu oge, enwekwara ike iji ya maka ọtụtụ arụmọrụ na akụkụ n'usoro mmepụta. Mbepu site na ike, onodu ike di elu, ijikota igwe na nke eletriki, njikwa mgbaaka na ihe nchedo nchedo.